OMN: Magaalaa Finfinneetti sagantaa raadiyoo Afaan Oromoon eegaluufi - BBC News Afaan Oromoo
OMN: Magaalaa Finfinneetti sagantaa raadiyoo Afaan Oromoon eegaluufi
Tamsaasa isaa waggoota muraasaan dura biyya alaatti bu'urreeffachuun qabsoo dargaggoo Oromoo keessatti gahee olaanaa bahaa kan ture, OMN, tamsaasa isaa TV'n taasisuun maddiitti dhiheenyatti sagantaa raadiyoo Afaan Oromoo eegaluuf jira.
Dhaabbata OMN'tti Itti-gaafatamaan Damee Finfinnee Obbo Toleeraa Fiqiruu BBC'tti akka himaniitti, dhaabbata raadiyoo FM Awaash 90.7 jedhamu waliin wal ta'uun sagantaa raadiyoo Afaan Oromotiin Finfinneerraa tamsaasu eegaluuf hojjataa jiru.
Sagantaan raadiyoo OMN Finfinneetti eegaluuf jedhu kunis Afaan Oromootiin maddiitti Afaan Amaaraatiinis akka ta'u kan himame.
Akka Obbo Toleraan jedhanitti, tamsaasni sagantaa raadiyoo kunis bara haaraatti eegaluuf jira.
''Raadiyoo Awaash irratti qophiiwwan adda addaa eegalla. Boodas gara sagantaa raadiyoo guutuu ta'etti kan dabarru ta'a,'' jechuun himu.
Yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee keessatti raadiyoon biraa Afaan Oromootiin FM'n tamsaasaa jiru, isa FM Finfinnee kan bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin tamsa'u qofaadha.
OMN Hagayya waggaa darbe raadiyoon akka eeyyamamuuf Abbaa Taayitaa Biroodikaastingii Itoophiyaatti gaaffii dhiyeeffachuu isaa ibsa.
Garuu, hanga ammaatti eeyyama hin arganne.
Ta'us ammoo 'Waan seeraa hunda guuttanneerra. Caalbaasii goona jedhanii lafarra harkisani,' jechuun yeroo dhihootti eeyyama argachuun raadiyoo mataasaanii akka qabaatan abdii qaban ibsu Obbo Toleeraan.
Erga MM Abiy Ahimad gara aangotti dhufanii as ammoo miidiyaalee hedduun biyya alaa turan biyyatti deebi'aniiru.
OMN waajjira isaa Finfinneefi magaalaalee kaan irratti kan banate yoo ta'u, gama raadiyoon ummata Oroomootiif filmaata haaraa fiduuf karoora akka qabu hima.
Obbo Jawaar: 'Aarsaa barbaachisu kafaluuf murteesseen galaa jira
Gama qabiyyeetiinis kan karaa TVn darbuun addaa jedhamanii kan gaafataman Obbo Toleeraan, ''Raadiyoon FM biyya kanaa qabiyyee, formaatiif akkasumas wanti isaan irratti xiyyeeffatan walfakkaata. Kanaaf waan haaraa ummata keenyaa dhiyeessuu barbaanna,'' jedhan.
''Dhihootti maqaa OMN'n raadiyoo akka qabaannu abdii qabna'' kan jedhan Obbo Toleeraan, inni amma eegaluuf jiran kunis fuuladuraaf akka isaan fayyadu himu.
Dhaabbatni miidiyaa FM Awaash 90.7 kan amma OMN irratti sagantaasaa tamsaasuuf deemu kunis kan duraan FM Zaamii 90.7, raadiyoo FM jalqabarra Finfinneetti hundaa'aan keessa tokko ta'edha.
Maqaasaa karaadhuma seeraatiin akka jijjiirrate Daarektarri Kominikeeshinii Abbaa Taayitaa Biroodikaastingii Itoophiyaa Obbo G/Giyoorgis Abrahaa BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee, miidiyaa hawaasummaa irratti dhaabbanni OMN raadiyoo duraan FM Zaamii 90.7 jedhamu kana akka biteetti ballinaan dubbatamaa jira.
Dhimma kana ilaalchisuun gaaffii Ittigaafatamaa kanaaf dhiyaateenis dubbichi dhara ta'u BBC'tti himaniiru.
''Qabeenyummaan raadiyoo kanaa kan keenya miti. Nuti walta'iinsaa (Partnership)'n waliin hojjechuuf malee bittaarra hingeenye.''
Haaluma walfakkaatunis, Obbo G/Giyoorgis ''Gurguramuu isaas ta'e nama biraatti dabarfamuu hinbeeku. Jijjiiramni maqaa garuu akka taasifame nan beeka. Maqaa Awaash jedhuun akka galmaa'e nan beeka,'' jedhaniiru.
FM Awaash 90.7 waliin hojjachuun maaf ijoo dubbii ta'e?
Waggoota muraasa dura yeroo mormiin ummataa Oromiyaafi naannolee Itoophiyaa biroo keessatti taasifametti, raadiyoon gaazexeessituu duraanii VOA turte, Aaddee Miimmii Sibihaatuun hogganamu, mormiicha qeequun ummata Oromoo biratti beekama.
Jawaar Mohammad maaliif biyyatti deebi'a?
Kana malees, qeeqxonni hoggantoonni miidiyaa kanaa aanga'oota duraanii Itoophiyaatti hidhata qabu jechuun himatu.
Daarektara Olaanaa OMN Obbo Jawaar mohaammadiifi qabeenya raadiyoo duraani Zaamii jedhamu keessaa qooda kan qaban Gaazexeessituu Miimmii Sibhaatuu jidduutti yeroo adda addaattii wal himannaan ture.
Jawaar Mahaammad: Bakka amma geenye bara 2020tti ni geenya abdii jedhun qaba ture
Dr. Abiy Ahimad: Dirree miidiyaa Itoophiyaa keessatti maaltu jijjiirame?
Jawaar Mohaammad: "Aarsaa barbaachisu kafaluuf murteesseen galaa jira"
'Itoophiyaan wixinee hidha Abbayyaa Masirii kuffifte'